कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बृद्धी, कसले कति पाउँने ? - Muldhar Post
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बृद्धी, कसले कति पाउँने ?
मूलधारपोष्ट २०७६, १५ जेष्ठ बुधबार 2329 पटक हेरिएको
काठमाडाैं-सरकारले कर्मचारीहरुको पनि तलव बढाएको छ । आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढेको हो । बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजपत्राङ्कित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीको बडाएको बताएका हुन्
वृद्धि भएको तलब प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने अब मुख्य सचिवको तलब ६५ हजार हुनेछ । त्यस्तै सरकारी अधिकृतको तलब अब ३५ हजार ९ सय हुनेछ। कार्यालय सहयोगीको तलब १९ हजार ४ सय ७४ हुनेछ।
कर्मचारी ऐन अनुसार हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि पछिल्लो तीन वर्षयता तलब सुविधा बढेको थिएन।
महंगीभत्ता र पोशाक भत्ता भने यथावत राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले महंगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ र पोशाकभत्ता ८ हजार बाट १० हजार रुपैयाँ बनाएको थियो। त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको २ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरेको थियो।
सांसदहरुलाई ९ अर्ब ९० करोड बाँडिने ।
सरकारले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ । अहिले ४ करोड रुपैयाँ पाएका सांसदले १० करोड रुपैयाँ सम्म माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । यो रकम कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न पाउने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको यो घोषणापछि सांसदहरुले गडगडाहट तालीले स्वागत गरेका छन् । हरेक सांसदलाई ६ करोडका दरले आउँदो वर्ष ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१५ खर्ब ३२ अर्बकाे बजेट, पूँजीगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सांसदलाई बजेटसम्मका कार्यक्रम समेटेर सरकारले लाेकप्रिय बजेट ल्याएकाे छ ।
राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड उठाउने, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड जुटाउने योजना छ । अपुग ४ खर्ब रुपैयाँ मध्ये २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट र अरु१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता बढायो, बुढाबुढीले अब मासिक ३ हजार भत्ता पाउने ।
सरकारले वृद्धभत्ता तथा एकल महिला भत्ता बढाएको छ । आउँदो वर्षको बजेटमा सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता बढाएर ३ हजार पुर्‍याएको छ । यसअघि वृद्धभत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ थियो । १३ लाख १० हजार वृद्धहरुका लागि यस वर्ष सरकारले ३ अर्ब ९३ कराेड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाभत्ता विनियाेजन गरेकाे छ । साथै सरकारले वृद्धवृद्धाहरुका लागि एक लाखबराबरकाे स्वास्थ्य बीमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भएकाे छ ।